Markab Saliid sida oo la afduubtay
Burcad-badeedda Somalia ayaa gacanta ku dhigay markab sida saliida qeydhin oo laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed.
Wasaaradda arrimaha Dibedda ayaa sheegtay in markabkan oo lagu magacaabo Samho Dream laga qabsaday meel 1.500 KM dhinaca koonfur bari kaga toosan gacanka Cadmeed.
Wasaaraddu waxay sheegtay in markabkab oo ka yimid dalka Ciraaq, uu ku sii jeeday gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka. Wasaaraddu waxay sheegtay in shaqaalaha saaran markabkan ay ka kooban yihiin 5 u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo 19 u dhashay dalka Filiponos.
Saraakiisha Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa arrinta afduubkan ka yeelanaya fadhi deg-deg ah.
Burcad-badeedda Somalia ayaa todobaadyadii la soo dhaafay si gaar ah u ugaarsanayay maraakiibta, iyagoo ka faaidaysanaya cimillada wanaagsana waxaa u suuro gashay inay afduubtaan ilaa 16 markab tan iyo bilowgii bishii March.
Burcad-badeedda ayaa caadiyan sii daaya maraakiibta ay afduubtaan iyo shaqaalahooda oo bad-qaba kadib marka ay lacago madaxfurasho ah helaan, taasoo mararka qaarkood ay lacagahaasi gaadhaan malaayiin Dollar.